यी शहर जो आकाशबाट हेर्दा रंगीन देखिन्छन् - Engineers Post
यी शहर जो आकाशबाट हेर्दा रंगीन देखिन्छन्
सुन्दर र रंगीन शहरले संसारका पर्यटक, आर्किटेक्टहरु मात्र नभई जो कोहीको नजर तान्छ । यदि कुनै अग्लो स्थान तथा हवाईजहाजको झ्यालबाट तल हेर्ने हो भने रंगीन छानाहरुले बनेका विभिन्न आकारका शहरहरु देख्न सकिनेछ । कुनै पनि शहरको रंगीन डिजाइन कोर्नुको पछाडि कुनै न कुनै कारण हुन सक्छ । मौसम रणनीति, परम्परागत शैली, पर्यटक तान्न लगायत विभिन्नखाले आर्किटेक्चरल डिजाइनमा शहरहरु निर्माण गरिएका हुन्छन् । यहाँ संसारका ७ रंगीन आर्किटेक्चरको अवधारणा अंगालेका शहरबारे चर्चा गरिएको छ ।
इटालीको प्राचिन शहर न्यापलका भवनहरु विविध रंगले रंगाइएका छन् । यस शहरको एरियल तस्विरले विभिन्न रंगहरुको अर्थपूर्ण सम्मिश्रण देखाउँछ । न्यापल शहरका भवनहरुमा पोतिएका यी रंगहरुले विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएका भवनहरुको दृश्य जनाउँछ ।
२. बुरानो टापु
इटालीको भेनिसनजिकै अवस्थित बुरानो टापु संसारका सबैभन्दा बढी पर्यटक पुग्ने गन्तव्य हो । बहुरंगी घरहरु हेर्न वर्षेनी ठूलो संख्यामा पर्यटक र विभिन्न मुलुकका आर्किटेक्टहरु त्यहाँ पुग्ने गर्दछन् । बुरानो टापुका माछा मार्ने व्यक्तिहरु साँझ घर फर्किदा आफ्नो घर पहिचान गर्न सहज होस् र हुस्सु लागेको बेला नजिकबाटै सहजै घर देखियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँ बहुरंगी अवधारणासहितको घर बनाइएको बताइन्छ ।
३. लस पाल्मास
स्पेनको लस पाल्मास प्रान्त रंगीन घरहरुका नामले परिचित छ । पोष्ट कार्डहरु प्रचलनमा रहेको समयमा पाल्मासका घरहरुका तस्विर हुन्थे । गर्मीयाममा सुर्यको ताप कम परोस् र इन्टेरियर स्पेसमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस क्षेत्रका घरको छतमा वाटर तथा हिट प्रुफ रंग पोत्ने गरिन्छ ।
थाइल्याण्डको बैंककका विभिन्न ५० वटा जिल्लामा पनि लस पाल्मासजस्तै रणनीति अपनाइएको छ । सुर्यको ताप कम गर्न र घरभित्र तापक्रम कम गराउन यहाँको घरको छतका टायलहरुमा लाइट रंग पोतिएका छन् । यस्तोखाले अवधारणा सन् १९९७ मा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
मोरोक्कोको कासाब्लान्सा शहरका घरहरु पनि आकाशबाट हेर्दा रंगीन देखिन्छन् । शहरको विविधता झल्काउन आर्किटेक्चरल विधिमा रंगीन भवनहरु बनाइएका हुन् ।
रातो, निलो र सेतो रंगमा देखिने यहाँका भवनहरुमा आर्किटेक्चरल विधिमात्र काफी छैन । यहाँको आर्किटेक्चर अवधारणाले भवनसँगै बगैंचा, रुख, नहरलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जुन आकाशबाट हेर्दा स्पष्ट रंगीन देखिन्छ ।
७. बायोन्टन विच अमेरिका
अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित बायोन्टन विचमा देखिने हरियो, रातो र सेतो रंग उचित योजनासहित निर्माण गरिएको शहरी योजना हो । प्राकृतिक र मानव निर्मित संयोजनसहित बनेको यस शहरी परियोजनालाई अग्लो स्थानबाट हेर्दा साच्चै मनमोहक देखिन्छ । –आर्क डेलीबाट
महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला आर्किटेक्ट– अध्ययन
प्रख्यात आर्किटेक्ट विलियमको निधन– जसले बनाएका थिए यस्ता चर्चित डिजाइन
तस्बिरमा यस्तो देखियो सोनाको २६ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १४ औँ कार्य समितिको निर्वाचन